I-JAYLIB: I-CHAMPION YENGCACISO YE-ALBHAMU - IINDABA
'Kwaye ngubani othe abavelisi akufuneki badlwengule?' UJay Dee ubuza 'kwiMishini', umkhondo wokuma kwi ...
'Kwaye ngubani othe abavelisi akufuneki badlwengule?' UJay Dee ubuza kwi-'Mission ', umkhondo wokuma kwintsebenziswano yakhe entsha kunye nomvelisi we-ultra-prolific u-Otis Jackson, Jr. (aka Madlib). Ayisiwo umthetho okhawulezayo okhawulezileyo njengoko iyinto elusizi yokuba abavelisi kunqabile ukuba bafumane phambi kwe mic-abavelisi abanjengo Kanye West kunye no-El-P bahlala bezingqina bekwazi ukuzibamba nge-heavyweight emcee. Ngethamsanqa, aba babini babengenangxaki yokwenza ixesha leemvano-siphelo: UJay Dee ubonakale ngokuqaqamba ngeSlum Village ngo-2000 IVolonti emnandi. II kunye solo ngo-2001 ukukhutshwa kweBBE Wamkelekile 2 Detroit Ngelixa uMadlib ebeka iingoma kunye no-Oxnard odumileyo, oseCalifornia osekwe ngokufihlakeleyo ngokudibeneyo eLootpack nakwiirekhodi zakhe ezizodwa njengaye (kulo nyaka isampulu yeBlue Note Iimpawu zoBlue ) kunye neQuasimoto (2001's Okungabonwayo ). Umxholo ongasemva kweprojekthi yeJaylib, ke, ubonakala ngathi sisiphelo esisengqiqweni: nganye ibonelela ngesingqi somnye umntu.
Njengoko kulindelekile, Isandi seChampion Akuthandabuzeki ukuba yenye yezona zinto zonwabisayo kunye nokuyilwa kwehip-hop kulo nyaka: ikhefu elinzima likaJay Dee kunye nekhefu elimangalisayo likaMadlib lokuncoma ngokugqibeleleyo, kwaye elona xesha lilungileyo lokufumana indawo ngokulula. Kodwa yibize ngokuba sisiprofeto esizimele ngokwakho: iingoma zizithende ze-Achilles. UJay Dee kunye noMadlib batshintsha indawo ngomkhondo ngamnye olandelelanayo, kodwa umyalezo wabo-- ikakhulu wokuba 'uJay Dee kunye noMadlib banobumbano', 'ukuba' bakule mothafucka, 'kwaye' bayaphilwa zizinto eziyimfuneko '- kunqabile ukuba amabhabhathane aye kwenye into.
sonny rollins indlela eya ngasentshona
Ngethamsanqa, irekhodi ligxile ekuphumleni kumagama alo: I-McNasty Filth eveliswe nguMadlib ithatha indima yomkhondo weqela kwaye ibulala nje, elinye iqabane libhengeza kunye ne-baritone sax drones ngaphambi kokudlulela kwi-Prefusian cut-ups kunye ne-hi- umnqwazi uhlaselo treble. Ingoma yomkhondo 'weQela leNtshatsheli', ekwaveliswe nguMadlib, iza ne-fuzz eninzi kunye ne-chorus ye-'Wah! ' Ngelixa ujikeleza isampulu yamazwi ezwi labasetyhini. 'Iqela leStrip' yeyona ngoma ihlekisayo yealbham, isampulu yegubu yesinyithi esasikhumbuza Super Mario 2 ixhasa ingxoxo eqaqambileyo phakathi kwe-duo apho iQuasimoto idlala khona umntu osebenza ngokuzinikela: 'Ndiyakuchukumisa kwaye ungandichukumisa.'
Ezintathu 'Iitraki- ezingatshatanga' Olubomvu ', icala le-B' iGosa ', kunye ne-'Mishini' ekhankanywe apha ngasentla Isandi seChampion Elona xesha lilungileyo. Ukutsala kungabikho manqindi, 'Olubomvu' upakisha i-vamp ye-piano vamp kunye nesampulu yamabhinqa ekwayiyimodeli encinci kaJay Dee, apho uMadlib ephosa abantu abaninzi kunye neQuasimoto-ism. Amaxilongo kaMadlib athulisiweyo 'kwiGosa' akhumbula uMiles Davis 'emva kweminyaka engama-50 esebenza noGil Evans (ngakumbi Iimayile eziPhambili okanye yoo-1960 Imizobo yaseSpain ), kunye nokuchazwa kwayo kuphendulwa ngokuchaseneyo nesampulu ekhawulezayo, umtya oqhayisayo kunye neempondo zomphefumlo zikaPhilly ze 'The Mission'.
Ukuba bekukho ikhadi lamanqaku le Isandi seChampion , UMadlib ngokungathandabuzekiyo uya kufumana amanqaku aphezulu kunoJ Dilla kumacala omabini abethiweyo, kodwa omabini la maqela agqitha kwindawo yokuhlwayela umrhwebi weendwendwe uTalib Kweli kwi 'Raw Shit', indawo ephantsi yealbham. Imveliso yevila, iitrope eziqhwalelayo zinje, 'Wonke umntu uthi ndiyayithanda / Leyo yenkomo / ndiyayithanda / ndiyayithanda,' Kwaye, 'Wonke umntu uqokelela nje' umjikelo / 'Yenza yonke into esifuna ukuyenza / Yehla,' kunye noKweli Ukuhanjiswa okungafunekiyo kwe-deadpan kwenza ukuba lo mzila ungathandeki. I-'React 'edityanisiweyo, ngelixa inomdla, iyaba nothango phambi kokuba igqitywe, kwaye ekuqaleni kukaMadlib ethembisa nge-revolver-like beat on' Strapped 'yintloko efanayo. Ngethamsanqa, ukutyibilika okunje kunqabile kwaye kuphakathi kakhulu.
Isandi seChampion ithiyori sisindululo esimangalisayo, kwaye ubukhulu becala iqela leJaylib lihambisa izingoma ezihlekisayo ezilindelwe kubo ngelixa, mhlawumbi ngokungathandabuzekiyo, bevuma kwivesi ukusilela kweengoma. Iitreyini ezijikeleza zijikeleza iiseshoni zaseMadvillain, amatye afanayo Phosa intsebenziswano phakathi kwe-MF Doom kunye neMadlib, kubonakala ngathi ithembisa ngakumbi ngomculo nangokomculo, kodwa ekugqibeleni, Isandi seChampion ngokuqinisekileyo ayinabunzima.
nyc iziporho neentyatyambo
Bojack horseman ixesha lesi-5 umhla
chaka khan molo ukonwaba
amakhwenkwe angama-bushwick bill
I-sufjan stevens carrie kunye neengoma ezisezantsi
Nicki minaj indlovukazi ye-albhamu